उत्तम सक्रिय हुनु Charcoal Latte 2019 मा लाभहरू
के गर्छ Charcoal Latte जस्तै स्वाद?
सक्रिय भयो Charcoal Latte, को रूपमा पनि उल्लेख गरिएको छ Black Latte, यसको स्वाददायी पेय पदार्थ हो जुन यसको प्रभावकारी वजन घटाउने गुणहरूको लागि प्रशंसित छ। उत्पादित Hendelको बगैचा, यो एक प्राकृतिक स्लिमि coffee कफी सूत्र हो, यसको पहुँच र तयारीको सहजता नोभेम्बर 2018 मा यसको पहिलो उपस्थिति पछि यसले अत्यधिक लोकप्रियता प्राप्त गरेको छ। यस समीक्षामा, तपाईले वजनको प्रबन्धनका लागि यस उत्पादनको विस्तृत विवरण पाउन सक्नुहुन्छ।
के कालो छ Charcoal Latte?
तपाईंको वजन नियन्त्रणको लागि सुरक्षित समाधानको साथमा, यो कफि ड्राई ड्रिंकले अन्य धेरै मूल्यवान स्वास्थ्य लाभहरू प्रदान गर्दछ। कालो Charcoal Latte हानिकारक भुखमरीको सहारा बिना नै उत्तम परिणामहरू प्राप्त गर्न मद्दत गर्दछ र तपाईंको शरीरलाई डिटक्स गर्दछ। यो पाउचको रूपमा प्यालामा प्याकेजमा वितरण गरिन्छ।
को लागि अन्तिम समाधान Black Latte जुन तपाईं आजको बारेमा जान्न सक्नुहुन्छ
पातलो आंकडाको लागि बाटो पत्ता लगाउने र अधिक किलोग्राम हटाउने दशकौंसम्म धेरै लोकप्रिय छ। विश्व अब छोटो अवधिको फिक्सहरुमा संवेदनशील छ र मानिसहरु अब यत्तिको निर्लज्ज छन् कि उनीहरु केहि पनि गर्न को लागी तयार छन र ट्रन्डी र शितु मानिने सबै कुराको लागि।
पेय सम्भवतः अँध्यारो हुन सक्छ, तर यसले तपाईको मुस्कान मोती सेतो बनाउँदछ। पेय पदार्थ सेवन वास्तवमै एकदम सजिलो र सुविधाजनक छ। समान इटालियन पेयलाई क्याफे कर्रेटो भनिन्छ। यो पानीमा घुलनशील, कफि-स्वादयुक्त पेय हो जुन प्रत्येक दिन एक पटक लिनु आवश्यक पर्दछ।
त्यहाँ बजारमा धेरै पूरक, औषधि र अन्य तयारीहरू छन् जुन तपाईंको सुस्वास्थ्यलाई मद्दत पुर्‍याउन सक्छ, उपस्थितिमा सकारात्मक प्रभाव पार्दछ, फ्याट बर्न र ऊर्जा थप्दछ। तपाईंले कहाँ मूल खरीद गर्ने पत्ता लगाउनुहुनेछ Black Latte मोलतोल मूल्यमा र उपभोक्ताहरूको वास्तविक प्रशंसापत्र पढ्न सक्नुहुन्छ।
कहाँ किन्ने Black Latte?
मूल ब्ल्याक Charcoal Latte कफी वजन नियन्त्रण को लागी एक विशेष उत्पादन हो। यो क्याफे, पसल र औषधि पसलहरूमा बिक्रीको लागि उपलब्ध छैन। त्यसोभए तपाईंले सोचिरहनुभयो होला, म यो कहाँबाट ल्याउन सक्छु? फिर्ती ढुवानी लागत ग्राहकको लागत मा छन्। त्यहाँ नेटमा धेरै गैर-मौलिक प्रस्तावहरू छन् जुन तपाईंलाई कम दरहरूमा प्रलोभनमा पार्दछ, तर तपाईंले ती सम्झना गर्न प्रयास गर्नुपर्दछ कि ती अत्यन्त खतरनाक हुन सक्छन्।
तपाईं यसलाई आधिकारिक निर्माताको वेबसाइटमा अनलाइन अर्डर गर्न सक्नुहुनेछ। तेस्रो-पार्टी स्रोतहरूमा नक्कली पूरक खरीद नगर्नुहोस्। कृपया तलको लिंक जाँच गर्नुहोस् र मूल खरीद कसरी गर्ने भनेर पत्ता लगाउन चरण-देखि निर्देशन निर्देशन पालना गर्नुहोस् Black Latte अनलाइन।
विशेषज्ञहरूले सक्रिय चारकोल बेनिफिटहरूको बारेमा के भन्दै छैनन् र यसले तपाईंको लागि के अर्थ गर्दछ
चारकोल सक्रिय हुन्छ जब यो सानो कण आकारमा घटाइन्छ, जसले यसको शोषक क्षमताको साथ सतह क्षेत्र माथि उठाउँछ। त्यहाँ केही विविध तरिकाहरू छन् जुन तपाईं आफ्नो टूथब्रशमा सक्रिय चारकोल प्राप्त गर्न सक्नुहुनेछ। यो 1500 ई.पू. देखि सबै प्रकारका बिरामीहरूको साथ सहयोग गर्न प्रयोग भएको छ।
सक्रिय चारकोलका धेरै फाइदाहरू छन्। यो युगौं पुरानो औषधीमा प्रयोग भइरहेको छ पूरै शरीर सफा गर्न प्रणालीमा विषाक्त पदार्थहरू अवशोषित गरेर, पेटको स्वास्थ्य, सफा छाला र मानक कल्याणका लागि ठूलो कारण, सक्रिय चारकोल कार्बन स्रोत (सामान्यतया काठ वा जलेको) द्वारा सिर्जना गरिन्छ। नरिवल शेलहरू) अत्यन्त उच्च तापक्रममा, त्यसैले सम्पूर्ण अक्सिजन सामग्रीबाट हटाइन्छ।
तपाईंले केही कोइला प्रयोग गर्नुभए पछि तपाईंलाई कत्तिको सहयोगी हुन्छ भन्ने महसुस गर्न थाल्नुहुनेछ। यो शरीर द्वारा अवशोषित हुँदैन र यसैले उत्सर्जनको क्रममा शरीरबाट बाहिर फसेको विषलाई मद्दत गर्न सक्छ। सक्रिय चारकोल को उपयोग एक मजबूत डिटोक्सिफिकेशन प्रक्रिया हो। केहि केसहरूमा र जब अर्को उपचारको साथ प्रयोग गरिन्छ, यो केहि रसायन र विषाक्त पदार्थहरूको शरीर हटाउने एक प्रभावकारी तरीका हुन सक्छ।
सक्रिय चारकोल लाभहरूको विवरण
हल्का ढिलो मलको लागि, चारकोल दिनको दुई पटक दिन प्रदान गर्न सकिन्छ। तपाईं कसरी सक्रिय प्रयोगको लागि कोइला राख्न सक्षम हुनुहुन्छ भनेर जान्नको लागि पढ्नुहोस्। सक्रिय कोइला एक उत्तम सोसाइटी सामग्री छ। धेरै औषधि ओग्रेड र ओभर-द-काउन्टर औषधीहरूको ओभरडोज भएमा पनि यो प्रयोग गरीन्छ। जब अन्य उपचारहरूको साथ प्रयोग गर्दा यो तीव्र विषाक्तताको लागि प्रभावकारी हुन सक्छ। यो सबैभन्दा गरिब व्यक्तिको लागि पहुँच योग्य उपाय हो, एकै समयमा यसले पृथ्वीको सबैभन्दा धनी व्यक्तिको जीवन बचाउन सक्छ।
सक्रिय कोइला सामान्यतया गर्भवती हुँदा प्रयोगको लागि सुरक्षित मानिन्छ। यो अन्य पूरक भन्दा फरक छ किनकि तपाईंले यसलाई दैनिक प्रयोग गर्नुपर्दैन। यो सामान्यतया ट्याब्लेट वा पाउडरको रूपमा तपाईंको स्थानीय किराना स्टोरको फार्मेसी सेक्सन फेला पार्न सकिन्छ। सकिएको चारकोल पार्भोको उपचारको लागि एउटा महत्त्वपूर्ण सामग्री हो।
के फाइदा छन्? Charcoal Latte?
हामीले पहिले कभर गरेको रूपमा, दैनिक खपत Black Latte धेरै लाभदायक गुणहरू दिन्छ। यस उत्पादनको सब भन्दा धेरै अनुमानित प्रभावहरू भनेको खानाको लालसालाई कम गर्दैछ, तपाईंको भूकलाई नियन्त्रण गर्दैछ, तपाईंलाई आफ्नो आहारसँगसँगै रहन मद्दत गर्दछ र तपाईंलाई आफ्नो खाना बानीको साथ आरामको भावना प्रदान गर्दछ। यो तपाईको लालसालाई दबाउनको लागि एक सक्रिय घटकको रूपमा नरिवलको दुध थपेर हासिल गरिएको हो।
शीर्षमा एक स्कूपको आइसक्रीमको एक्सेसन एउटा प्रख्यात भेरियन्ट हो। तयारीमा बहुमूल्य पोषक तत्वहरूको एक रन छ र स्वस्थ कार्बोहाइड्रेट प्रोटीनहरूको आपूर्ति छ। तपाईले दोस्रो खाजाको सट्टा तयारी प्रयोग गर्न रोज्न सक्नुहुन्छ।
यसका अन्य फाइदाहरूमध्ये Black Latte चारकोल कफी, तपाईं काम, स्कूल वा जिममा अधिक उत्पादक हुनु पर्छ। वास्तवमा, बोसो जलाउनुले तपाईलाई उर्जा दिन्छ, दुबै शक्ति र मानसिक शक्ति दिईन्छ। कुनै अधिक तपाईले ऊर्जा स्रोतको रूपमा अस्वास्थ्यकर चिनीले भरिएको फ्याट्टी बनहरूमा जानुपर्दैन। एक कप मा यति धेरै भलाई!
ईमान्दारलाई भलाईको लागि सत्यता Charcoal Latte
सक्रिय चारकोल ल्याट्सहरू आगामी विशाल चीजहरू हुन्, र ती आश्चर्यजनक हुन्। तपाईंको लेट्ट पर्याप्त अनौंठो नहुन सक्छ। सत्य यो हो कि यस दिनहरू लेट्टसको पूर्ण इन्द्रेणी बनाउन सम्भवतः धेरै प्रकारका लेटेस छन्।
यदि तपाईंलाई द्रुत डिटोक्स चाहिन्छ भने सक्रिय कोइला लेटेसले आदर्श छनोट गर्दछ। यसलाई कालो ल्याट पनि भनिन्छ। नतिजाको रूपमा, तपाईं आफ्नो खाना खपत, शरीरको दृष्टिकोण र, अन्ततः तपाईंको जीवन, सबै एक स्वादिष्ट कफी पेयमा नियन्त्रण गर्नुहुन्छ। Black Latte शाकाहारीहरूका लागि उपयुक्त छ किनकि यसमा कुनै पशु उत्पादनहरू छैन। तपाईं पूरा सूची जाँच गर्न सक्नुहुन्छ Black Latte अवयव.
रचना: सामग्रीहरू के हुन्?
धेरै उत्तम समग्र तस्वीर पाउनको लागि, सामग्रीहरूमा नजिकबाट हेरौं। निर्माताले केहि सामग्रीहरू समावेश गरेको वास्तविक वास्तविकताबाट ठग्ने छैन। यो जैविक सामग्रीले बनेको हो र रासायनिक सक्रियकर्ताहरू समावेश गर्दैन।
क्लिनिकल परीक्षणको नतीजामा निर्भरता, असंख्य ग्राहक प्रशंसापत्र विश्लेषण गर्ने बाहेक, यो निष्कर्षमा पुग्न सजिलो छ। Black Latte स्वास्थ्य राज्यको बावजुद, सहिष्णु छ।
सक्रिय चारकोल - को एक अद्वितीय घटक Black Latte यसले यसको अनौंठो स्वाद र स्लिमि properties गुणहरूमा थप गर्दछ। यो एक सुरक्षित पदार्थ हो जुन तपाइँले खान्नुहुने खानाबाट 80% फ्याटको शोषण र संचयलाई रोक्दछ। यसले स्वस्थ पाचन, पुरानो बोसो हटाउने र शरीर डिटोक्सिफिकेशनका लागि एजेन्टको रूपमा काम गर्दछ।
नरिवलको दुध ऊर्जा प्रदान गर्दछ त्यसैले यो शारीरिक रूप बाट सक्रिय मान्छे को आहार मा एक राम्रो समाधान छ।
एल-कार्निनिन - अतिरिक्त subcutaneous बोसो, सेल्युलाइटिस, छाला sagginess लडाई हटाउँछ। आकारमा रहनको लागि एक महत्त्वपूर्ण कम्पोनेन्ट जब तपाईं धेरै वजन घटाउनुहुन्छ।
ओमेगा-3 - शरीरमा फ्याट अपघटन को प्रक्रियामा संलग्न, लेप्टिन स्तर पम्पिंग। यो तत्व प्राकृतिक रूपमा उत्पादन गरिएको छैन, ओमेगा-एक्सएनयूएमएक्स प्राप्त गर्ने एक मात्र तरीका बाह्य स्रोतहरू मार्फत हो।
कसरी तयार छ Charcoal Latte?
बनाउने Black Latte धेरै सजिलो छ। यो एक तत्काल शैली कफी हो जुन तपाइँको वर्तमान दिनचर्यामा अनुकूल हुन सक्छ। Charcoal Latte दिन को एक पौष्टिक आहार भन्दा आहार पछ्याउन सल्लाह दिन्छ। एक सजिलो र व्यावहारिक प्याकेजि preparation तयारीको परिणामको रूपमा Black Latte कहिँ पनि प्रयोग गर्न सकिन्छ। कोइलाको पेयले शाकाहारीहरूलाई आकर्षण गर्ने छ, किनकि गाईको दुधको एक थोपा पानी छैन। थप रूपमा, Black Latte यसको फाइबर पनि हुन्छ, जसले मेटाबोलिज्ममा महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्दछ।
डिटॉक्स अभिव्यक्ति लोकप्रियतामा बढ्दैछ, यस धारणाको साथ कि हामीले स्वस्थ रहनको लागि हामीले शरीरबाट विषाक्त पदार्थहरू हटाउनु पर्छ। मेरो छाला पनि कायाकल्प छ, जबकि मलाई वास्तवमै थाहा छैन कि यसको कारणले हो Black Latte, वा केवल संयोग मात्र। यदि तपाईं एथलेटिक शरीरमा रुचि राख्नुहुन्छ भने, तपाईंले व्यायाम गर्नै पर्छ। तौल घटाउन उत्पादको सेक्सनको साथ बिहानको कप कफीलाई बदल्नको लागि यो पर्याप्त छ र एक महिनामा तपाईं अविश्वसनीय परिणाम पूरा गर्नुहुनेछ!
को एक प्रमुख सुविधाहरु Black Latte यसको तयारी गर्न सजिलो छ। चाँडै, तपाईंको दैनिक कार्यविधिमा यस पेयको उपभोगलाई निर्माण गरेपछि, तपाईंले यसलाई आफ्नो जीवनको गुणस्तरलाई सकारात्मक रूपमा प्रभाव पार्नुहुनेछ अतिरिक्त बोसोहरू जलाएर र तपाईंको मुडलाई बढाएर, तर तपाईंको बहुमूल्य समय बचत गरेर। केवल एक कप तातो वा पानीको कालो कोइला ल्याटे पाउडरको स्कूप थप्नुहोस् र कफीले यसको बनावट प्राप्त गर्न सुरु नगरे सम्म यसलाई चलाउनुहोस्। नोट गर्नुहोस् कि तपाईको स्वस्थ दैनिक उपभोग तालिकामा खुराकको मात्रा बढाउनको लागि सिफारिश गरिएको छैन।
जब तौल घटाउन को लागी कुनै उत्पाद contraindication छैन यो एक चमत्कार हो। यदि तपाईं गर्भवती हुनुहुन्छ वा तपाईं स्तनपान गर्दै हुनुहुन्छ भने यो पूरक प्रयोग नगर्नुहोस्। पौष्टिक पूरक विविध आहारको विकल्प होइन।
मैले गर्न छनोट गरेको सब भन्दा पहिले केहि समीक्षाको खोजी गर्नु थियो Black Latte विभिन्न वेबसाइटहरूमा। हालसालै, त्यहाँ इन्टरनेटमा अभिनव चारकोल कफी स्लिमि drink पेयको बारेमा छलफल छ। ग्राहकहरूको आहार अनुभव र परिणामहरूको बारेमा राय जाँच गर्नुहोस्। के यसले काम गर्दछ?
म मेड लिने प्रशंसक होइनँ त्यसैले मैले सोचे कि कफि पिएर तौल गुमाउने सम्भावना रमाईलो विचार हो। म एउटा प्याकेज कार्य गर्न चाहान्छु, यसको एक चम्चा थपेर Black Latte उमालेको पानीको कपमा, जो अद्भुत स्टीमिंग लेटे कफीमा परिणत हुनेछ। यसको एक जिज्ञासु स्वाद छ, मीठो कोइलामा जस्तै। म चाँडो बिना यसलाई पिउनेछु, जस्तो कि म सामान्य कफी पिउँदछु, र यसले मेरो भोक मेटाउँदछ। एक कप पछि Black Latte मेरो पेटमा पूर्णताको अनुभूति भयो, मानौं मैले राम्रा खाना खाए।
लगभग 10 दिनको लागि म3कप पिउँदछु Black Latte एक दिन: खाजाको सट्टा र कामको घडीमा, जब मलाई खाजा हुन्छ जस्तो लाग्थ्यो। समय बित्दै जाँदा, मेरो मुखमा केहि फ्याँक्ने बानी बित्नेछ, र मैले यसलाई लन्चमा मात्र पिउन थालें।
2 हप्ता भित्रमा मेरो भोक सामान्य भयो, मेरो पाचन सुधार हुनेछ र मेरो सूजनले मलाई अब चिन्ता गर्दिन। त्यो समय पनि हो जब मैले गम्भिर तौल घटाउन शुरू गरें। मेरो शरीरको आकार राम्ररी स्पष्ट हुँदै गइरहेको थियो, मेरो छेउमा र हिप्समा फ्याटबाट अलग भई। चाखलाग्दो कुरा, मेरो छातीको आकार उही रह्यो र मेरो अनुहारको छाला कडा भयो। मेरो सेल्युलिटिससमेत लगभग सकिसकेको थियो। मैले चाँडै कफी पिएर परिणामहरू बिना नै तौल कम ग .्यो।
मैले मेरो तौल प्रबन्ध गर्नका लागि विभिन्न प्रयासहरू गरें, तर मेरो मनपर्ने कुराहरू यति टाढा छन् कि Black Latte। नामले कफी सुझाव दिन्छ, जुन बिहान पिउन सिफारिस गरिन्छ। यस पेयले धेरै सक्रिय कोइला र नरिवलको दुध समावेश गर्दछ, मिठो गन्धको साथ यसलाई अँध्यारो बनाउँछ। केहि अनौंठो तरिकामा, यसले तपाईंको मुडलाई माथि उठाउँछ। यसले तपाईंको जठरांत्रको मार्गको काम सुधार गर्दछ, तपाईंको शरीरलाई डिटोक्स गर्दछ र यसलाई शुद्ध पार्छ।
प्रयोगको पहिलो दिनमा मैले मेरो भोकमा हल्का परिवर्तनहरू महसुस गरें तर 5-7 दिन भित्र मैले मेरो तौलमा यादयोग्य ड्रप देख्न थालें। औसतमा, म प्रति हप्ता 4kg गुमाउने थियो। मैले मेरो लागि राखें Black Latte लगभग एक महिनाको लागि आहार र 15kg समग्र गुमाएर उल्लेखनीय परिणामहरू प्राप्त गर्‍यो। मैले मेरो सम्पूर्ण शरीरमा हल्कापन महसुस गरें। मलाई विशेष गरी मेरो छाला टोन्ड गर्न मन पर्थ्यो, झोला वा केही पनि होइन। मेरो कम्मर राम्रो थियो। मेरा साथीहरूले याद गरे कि म पातलो र सुन्दर छु। म समय समयमा डिटॉक्समा यो दिनचर्या दोहोर्याउँदैछु, मैले प्रभावको आनन्द उठाएँ। म आदेश दिन्छु Black Latte अनलाइन।
My Black Latte अनुभव एक स्वैच्छिक निर्णय थियो। मैले यसका बारे विस्तृत जानकारी अनलाइन पढेर यो छनौट गरेको थिएँ। मैले मेरो जिम कोचलाई पनि सोधे, जसले सिफारिस गरे। पाउडर उमालेको पानी जस्तै चिया वा कफीमा हाल्नु पर्छ, र खानाको साथ खपत गर्नुपर्दछ, वा खानाको सट्टामा। म लामो घण्टा काम गर्दछु ताकि म कहिलेकाहीँ यो नाश्तालाई यस पेयको साथ प्रतिस्थापन गर्दछु, कहिलेकाँहि खाजाको सट्टा, र कहिलेकाहीं खानाको सट्टा पनि
यस पेयको कम्पोजिसनले तपाईंलाई 6-8 घण्टा लिनको लागि खानेकुराको तृप्ति गर्न अनुमति दिँदछ, जुन मैले आफ्नै आँखाले देखेको हुँ। जब मसँग खानेकुराको लागि समय छैन, Black Latte मेरो लागि छनौट हो।
यो पेय मेरो शरीरमा एक सक्रिय प्रभाव थियो। पहिलो हप्तामा मैले 3kg अतिरिक्त वजन कम गरें। हप्ता पछि म 5-8kg हप्तामा गुमाउने थियो। म सक्रिय, हंसमुख, काम गर्न समय पाएँ, मैले फेरि आफ्नो जीवनलाई माया गर्न थाले, ऊर्जाको एक आन्तरिक स्रोत फेला पार्न। मेरो श्रीमान् पनि परिणामसँग सन्तुष्ट हुनुहुन्छ किनकि मेरो शरीर पातलो भएको छ र हामीले धेरै यौन सम्बन्ध राख्न थाल्यौं। मेरो सोफेले पनि मलाई अतिरिक्त भार दिन सुरु गर्यो किनकि मेरो तन्दुरूस्ती सुधारिएको छ, म छोटो बतास बिना व्यायाम गर्दछु र मेरो अतिरिक्त तौल बाटोमा जान सक्दैन। मेरो छाला ठीक आकारमा छ, वजन कम भए पनि यसको तंग छ।
कोइला कोल स्वास्थ्यवर्धक छ?
सक्रिय चारकोल कम्तिमा 1000 दशकको लागि पूर्वी र पश्चिमी औषधिमा प्रयोग गरिएको थियो। यसले विष चुम्बकको रूपमा कार्य गर्दछ। यसले औषधी र रसायनको एक विस्तृत विविधता लिन्छ।
चारकोल ल्याटेमा के हुन्छ?
जब तपाईं छिटो डेटोक्स र तौल नियन्त्रणको लागि चाहानुहुन्छ सक्रिय चारकोल लेटेसले आदर्श छनोट गर्दछ। यसले तपाईंको भलाईको सामान्य सचेतनाको लागि एक अद्भुत पूरकको रूपमा काम गर्दछ, यसको मतलब यो तपाईंको दैनिक खाना तालिकामा एक साधारण र स्वादिष्ट थप हो।
कोइलाको लेटेको स्वाद के मन पर्छ?
स्पष्ट रूपमा कोइलाको स्वादको ठूलो सम्झौता छैन जुन सम्भवतः ठूलो कुरा हो। ल्याटेटलाई वेट क्यापुचिनो भनिन्छ। लेट्टको सम्बन्धमा त्यहाँ केहि विशेष छ जुन दिनलाई अलि बढी जादुई बनाउँदछ।
के कोइलाले तपाईंलाई वजन कम गर्न मद्दत गर्दछ?
संग Charcoal Latte प्रत्येक खानाले डोपामाइन छोड्दा बढी सन्तुष्टि ल्याउँछ, हर्मोन तपाईंको खुशीको अनुभूतिको लागि जिम्मेवार हो। यसका साथै यसले क्यालोरी बर्न गर्ने काम गर्दछ जसले तपाईंको फिगरमा यस्तो भयानक टोल लिन्छ, जुन सपना देख्दै हुनुहुन्छ भन्ने पातलो दृश्यको नजीक ल्याउँदछ, र तपाईंलाई लामो अवधिमा पनि आकारमा रहन मद्दत गर्दछ।
के हो Black Latte?
Black Latte एक तात्कालिक पेय हो जुन तपाईंलाई एक कप कफी माथि वजन बसाउन मद्दत गर्दछ।
महिना देखि महिना कोर्सको समापन पछि, हराएको तौल एक पात्रो वर्ष भित्र फर्केर आउँदैन, तर यो अवधिको समापनमा म, तथापि, तपाईंलाई परिणाम एकत्रीकरण गर्न प्रोफेलेक्टिक कोर्सको अनुभव गर्न सल्लाह दिन्छु। यो खाना भन्दा अधिक शक्तिशाली छ र तपाईं जित्ने विजयी।
पातलो र सकारात्मक रहनुहोस् Black Latte!
6 मा टिप्पणी गर्दछ "के गर्छaCharcoal Latte जस्तै स्वाद? "
अगस्ट 4, 2019 12 मा: 15 बजे
स्कूलको कारणले गर्दा मसँग यी अधिक वजन समस्याहरू थिए। केटीहरूले मलाई पनि हेरेनन्, म भूत जस्तै थिए। तर जब तिनीहरूले मलाई देखे, तिनीहरू सँधै मलाई हाँसोन्थे, मेरो वजनमा। त्यसो भए, मैले केहि अंक प्राप्त गर्न स्मार्ट हुन सिकें। तर दिमाग यति सेक्सी छैन। त्यसैले मेरो चाहना केटीलाई डेटि of गर्ने मेरो संभावनाहरू थोरै छन्। जस्तो मेरो मांसपेशीहरू थिए। दुखद तर सत्य।
एकचोटि, म भाग्यमानी भएँ र निकै राम्रो, एउटी केटी भेट्टाइन निकोल। र उनले मलाई डेटि forको लागि हो भने। म क्लाउड नौ मा थिए। हामीले एक महिना वा धेरै महिनाको लागि मिति लियौं, र त्यसपछि निकोल क्रोधित र माग गर्न थाले। हामी सबै यथार्थवादी हुनुपर्दछ। ठूला चल्लाहरू उनीहरूका साझेदारहरू अझ ठूलो भएको चाहान्छन्। उनले भने कि म धेरै प्यारी र स्मार्ट र अन्य। तर म धेरै मोटो छु र उनी मलाई पटक्कै मनपर्दैनन्।
बर्बाद त्यो मैले महसुस गरेको छु। मैले 86 किलोग्राम 173 सेमी नाप्ने तौल गर्‍यो। र, मसँग पुरानो माइग्रेन थियो, त्यसले चीजहरू झन नराम्रो बनाइरहेको थियो। म यस बारे मा मेरो डाक्टर हेर्न गए। र के उसले मलाई भन्यो म सुरुमा निराश थिएँ। उनले भने कि मेरा स्वास्थ्य समस्याहरू मेरो अधिक वजनको कारणले हुन्।
अगस्ट 4, 2019 12 मा: 18 बजे
म मेरो अधिक तौलबाट तंगै थिएँ र कुनै नराम्रो सम्भाव्यताबाट यसलाई हटाउनको लागि नराम्ररी चाहान्थें। म एक धेरै प्रभावी फ्याट बर्नरको खोजी गर्दै थिए। म कहिल्यै जिम मान्छे थिएन, किनकि म प्रबन्धकको रूपमा काम गर्दछु र सँधै दगुर्नु पर्छ। म सँधै स्वस्थ थिएन, त्यसैले मलाई प्राकृतिक र सुरक्षित उपचार चाहिन्छ। अन्तमा, मैले मात्र सुरक्षित, सरल र प्रख्यात उत्पादन फेला पारे - Black Latte। मलाई कफि मनपर्छ र खेलकुद गर्न चाहन्न। त्यसैले मैले मन पराउने सबै फिजी पेयहरू प्रतिस्थापन गरें Black Latte। एक हप्तामा, मैले3किलोग्राम गुमाइन!2हप्ता पछि, -7 किलो! अवश्य पनि, मैले आफूलाई स्वादिष्ट खाना इन्कार गरेन। मैले धेरै राम्रो महसुस गर्न थालें, मेरो माइग्रेनहरू गए! मेरो शरीर उत्तम छैन तर धेरै केटीहरूलाई यो आकर्षक लाग्छ। वास्तवमा, निकोलले मलाई एकचोटि देख्यो र तपाईंले उनको अनुहार उनको जबड्रोबाट झर्दै गरेको देख्नुपर्नेछ। उनी म कहाँ आए र भनिन् कि यो मलाई अब देख्न साँच्चै खुशी लाग्यो। साथै, उनले भनिन कि म ... भिन्न देखिन्छु। धेरै सुन्दर - उनले मलाई भनिन् र मितिमा मलाई आमन्त्रित गर्नुभयो। मेरो तौल घटाउनु भन्दा पहिले, म दु: खित हुनेछु र उसका शब्दहरूबाट प्रसन्न हुन्छु। तर अब? आउनुहोस्, त्यहाँ मसँग धेरै अवसरहरू छन्, यति धेरै राम्रा तातो केटीहरू मेरो लागि केहि गर्न इच्छुक छन्! त्यसो भए पक्कै पनि मैले उनलाई इन्कार गरें र मेरा सबै निराशाहरूको लागि रोएँ। र त्यो कुरूप विगतमा मेरो जीत थियो!
मलाई काट्नुहोस्, निकोल! निकोल यति सानो प्यारी थियो कि मैले उहाँसँग हुँदाको कल्पना पनि गरेकी थिइनँ जबदेखि म मेरो राम्रो स्वभावको भएँ। आजकल केटीहरू प्रायः त्यस्तै हुन्छन्। तिनीहरू हामीबाट पैसा र मांसपेशीहरू चाहन्छन्, पुरुषहरू। तिनीहरू जहिले पनि राम्रो पेनीब्यागहरूबाट पैसा प्राप्त गर्न खोज्छन्।
तर अब म एक हुँ जसले कार्यक्रम चलाउँछ! विकल्पहरू छनौट गर्ने म हुँ। तौल घटाउनु भन्दा पहिले, मैले बुझ्न सकेन कि महिलाहरुको औसतन पुरुषमा यति शक्ति छ। र अहिले मेरो लागि यो स्पष्ट छ कि यो परिवर्तन हुन सक्छ। मानिस सधैं निर्णय लिने एक हुनु पर्छ। आफ्नो महिलाहरु तपाइँ शोषण गरौं!
यदि तपाईंसँग अझै प्रश्न छ भने, मँ यो फेरि भन्न पर्छ। आफ्नो जीवनको नियन्त्रणमा रहेको व्यक्ति बन्न, तपाईंलाई केवल एउटा चीज चाहिन्छ। र त्यो हो Black Latte!
अगस्ट 4, 2019 12 मा: 21 बजे
मलाई मोटोपना थियो र मेरो जीवन त्यस्तै दुःस्वप्न थियो। र यसका अतिरिक्त, मसँग एक प्रेमिका थिएन, किनभने मोटो केटीहरूले पनि एक पार्टनर भेट्टाउन सक्छ तर मोटा पुरुषहरू होइनन्! तर त्यो परिवर्तन गर्न सकिन्छ! मैले मेरो साथी रोबर्टको सल्लाह सुने र प्रयास गरे Black Latte। त्यसले मेरो जीवनलाई पूरै परिवर्तन गर्यो !!! कुनै अधिक फ्याट रोल र एक्लो रातहरू छैनन्!
म मेरो सबैभन्दा कठिन समयहरूमा गुज्रिरहेको छु जब मेरो अधिक वजन भएको थियो, र मेरा बच्चाहरु र मेरी श्रीमतीले निरन्तर यसो भन्दै थिए कि म मोटो छु। तर मैले तपाईको एउटा लेख पढें र प्राकृतिक फ्याट बर्नरको खोजी गर्न सुरू गरें जुन मेरा समस्याहरू हल गर्दछ। र मैले फेला पारे! डाइटहरू र हार्ड वर्कआउटहरू छैनन्! Black Latte एक मात्र तरिका हो!
तपाईं मेरो मनपर्दो म्यागजिन हुनुहुन्छ, त्यसैले म तपाईंको पाठकहरूलाई मेरो अधिक वजनको सुरक्षित समाधान र प्रभावकारी समाधानको बारेमा जान्न चाहन्छु - Black Latte। यसले ममा राम्रोसँग काम गर्यो, किनभने मैले 22 किलोग्राम गुमाइन! मैले लिन बन्द गरें Black Latte4महिना अघि, र मेरो तौल परिवर्तन हुँदैन। आश्चर्यजनक पेय!
धन्यबाद, तपाईका सबै कामका लागि! तपाईको पत्रिका सब भन्दा राम्रो हो! यसैले मँ मेरो कथा साझा गर्न मा लेख्दै छु अति द्रुत र प्रभावकारी वजन घटाउने बारे। मैले लिन शुरू गरें Black Latte पानी बाहेक मेरा सबै पेयहरूको सट्टा। र अब म पूर्ण रूपमा नयाँ व्यक्तिको जस्तै महसुस गर्छु! मेरा सबै समस्याहरू विगतमा छन्! यो उत्तम हो, त्यसो भए तपाईं पनि! तपाईलाई भाग्य र समृद्धि चाहानुहुन्छ!